कृति सित्तैमा बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ
लाहुरे परिवारमा जन्मे हुर्केकी गौरी तमु नेपाली र गुरुङ साहित्यमा परिचित नाम हो । नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेकी पूर्वसञ्चारकर्मी गौरी गीत, गजल, मुक्तक र कविताका साथै विभिन्न पत्रपत्रिकामा आलेख र समीक्षाहरु पनि लेख्छिन् । उनी सर्जकमात्रै होइनन्, साहित्यिक कार्यकर्ता पनि । गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालको अध्यक्ष, राष्ट्रिय नारी साहित्य परिषद्को सचिव, मुक्तक मञ्च पोखराको कोषाध्यक्ष, गजल सन्ध्या पोखरा र स्टडी सर्कल सोसाइटीमा पनि आवद्ध छिन् । नेपालमै पहिलोपटक मुक्तक विधामा नेपाली र गुरुङ दुवै भाषामा लेखिएको उनको पहिलो कृति ‘समैं दर्बानी’ (समयको दर्पण) मुक्तकसङ्ग्रहको लोकार्पण भएको महिना दिन नपुग्दै बजारमा पुस्तक अभाव छाएपछि दोस्रो संस्करण निकाल्ने तयारीमा छिन् लेखिका गुरुङ । नेपाली र गुरुङ साहित्यमा चर्चा रहेको समैं दर्बानीको सेरोफेरोमा साहित्यकार गौरी तमुसँग रोशनी गुरुङले गरेको कुराकानी ।
तपार्ईको लेखनयात्रा कहिलेदेखि सुरु भएको हो ?
करिब दुई दशक अगाडिदेखि गैंडाकोट र चितवनबाटै प्रारम्भ भएको हो मेरो लेखनयात्रा । १४/१५ वर्षदेखि नै कविता, मुक्तक र गीतहरु लेख्थें । तर, प्रकाशन र प्रतियोगितामा १२ कक्षासम्म पढ्दामात्रै हिँडेँ । त्यसपछि मिडियामा प्रवेश र विवाहपछि प्रतियोगिता र पत्रिकामा छपाउने काम लगभग गरिएन, डायरीमा लेखेर राख्ने काममात्रै भयो ।
‘समैं दर्बानी’बाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ? बजारमा पुस्तक अभाव भएकै हो त ?
मैलै कल्पना गरेको नै थिइनँ समैं दर्बानीलाई पाठकहरुले यति धेरै माया र विशेष गुरुङ समुदायले महत्वपूर्ण कृतिको रुपमा लेलान् भनेर । समैं दर्बानी नेपाली र गुरुङ भाषामा समेत भएकोले यसका पाठक धेरै भए र बजारमा पुस्तक अभाव भयो अब दसैंतिहारलगत्तै दोस्रो संस्करण आएपछि सबैले पढ्न पाउनुहुनेछ । पुस्तक छपाउँदा संख्याका हिसाबले गुरुङ समुदायका लागि पनि भनेर छुट्टै हिसाब गरिएनछ । अहिले विशेषगरी अरब मुलुक र बेलायत, अमेरिकातरिबाट पुस्तकको माग भइरहँदा नेपालमै समैं दर्बानी अभाव छ ।
पहिलो कृति मुक्तक नै किन ?
किनकि मुक्तकबाटै मेरो साहित्य लेखनयात्रा प्रारम्भ भएको र अहिलेसम्म नेपाली साहित्यको मुक्तक विधामा गुरुङ भाषामा कसैले कृति ननिकालेकाले मैले समैं दर्बानी ल्याएकी हुँ । म नयाँ प्रयोग गर्न मन पराउने भएकोले ऐतिहासकि रेकर्ड राख्ने सोचले पनि निकै मेहनत गरेर यो मुक्तकसंग्रह तयार पारेकी हुँ ।
के छ समैं दर्बानीभित्र ?
यसभित्र १ सय ३५ वटा मुक्तकहरु छन् । देब्रे पानामा नेपालीमा १, २, ३, गरेर राखिएको त्यहीँ मुक्तकलाई दाहिने पानामा १, २, ३ गरी अनुवाद र भावानुवाद गरेर राखेकी छु । यसभित्र मानव जीवन र समाजका विभिन्न रङहरु छन् अझ भनौं यो युगकै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विकृति विसङ्गति र नारीका वेदनाहरुलाई मैले मुक्तकीय स्वरुप दिएकी छु । यसमा सतही रुपमा तत्काल वाह वाही र तालीका लागि लेखिने मुक्तकीय धारलाई छोडेर गहन र जिम्मेवार किसिमले लेखिएका मुक्तकहरु छन् ।
समैं दर्बानीका चार लाइनका मुक्तकहरु पढिसकेपछि पाठकले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । बस् यत्ति भनेँ अहिलेलाई ।
अन्य कुन कुन विधामा लेख्नुहुन्छ ?
गीत, कविता, गजल र लेख आलेखहरु लेख्छु । विशेष गुरुङ समुदायका लागि नै लेख्छु म ।
परिवारमा कसरी साहित्यिक वातावरण मिल्यो त ?
लेख्नलाई विवाह पहिले बाबाको साथ र प्रेरणा हो भने विवाहपछि श्रीमान्को साथ र सहयोग छ । र, म नेपाली साहित्यको विद्यार्थी भएकोले पनि लेखनमा अझै सहज छ ।
आख्यान लेखेर सबैले चर्चा र पैसा कमाइरहेको यो बेला तपार्ईचाहिँ किन मुक्तकमा ?
हेर्नुस् जीवनमा पैसामात्रै सबथोक होइन, पैसाबाहेक आत्मसन्तुष्टि र जिम्मेवारीहरु पनि हुन्छन् । कुनै दिनमा पोखरा रेडियो नेपालमा आएर गुरुङ गीतहरु खोजेर तराई÷मधेसको कालिका एफ.एम.मा पहिलोपटक गुरुङ भाषाको कायक्रम चलाउने व्यक्ति पनि मै हुँ, पठन र लेखन संस्कृतिमा पछाडि परिरहेको गुरुङ समुदायलाई अब साहित्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालको संस्थापक अध्यक्ष भएर मञ्चका साथीहरुसँग मिलेर गुरुङ भाषा र साहित्यका लागि काम गरिरहेको व्यक्ति पनि मै हुँ । यो समैं दर्बानीलाई नेपालमै पहिलोपटक नेपाली र गुरुङ दुवै भाषामा ल्याउने व्यक्ति पनि मै हुँ । यहाँनेर मैले के भन्न खोजिरहेकी छु भने अहिलेसम्म मैले जति पनि कामहरु गरे कहीँ न कहीँ म आफ्नो गुरुङ भाषा र साहित्यको लागि केही नयाँ र ऐतिहासिक काम गरेँ र गर्दैछु जस्तो लाग्छ । यो सबैै गर्नुको एउटै कारण हो, गुरुङ समुदायप्रतिको मेरो जिम्मेवारीबोध र आफ्नो भाषाप्रतिको मोह । किनकि जुन दिन भाषा मर्छ त्यसदिन त्यो जातिको जातीय अस्तित्व मर्छ त्यसकारण प्रत्येक समुदायले आफ्नो भाषाको संरक्षण र संवद्र्धन गनुपर्छ । यदि हामी नेपाली हौं र साँच्चै नेपालको अस्तित्व जिवन्त रहेको देख्न चाहन्छौं भने संस्कृत र नेपाली भाषालाई माया गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ ।
साहित्यका मुक्तक, गजल, कविता विधा किन कम बिक्री हुन्छन् ? साहित्यको यी विधाहरु लेखेर जीविका चल्ने अवस्था आउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले त साहित्यिक कृति हस्ताक्षर गरेर सित्तैमा बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । फेरि यस्तो पनि हो, यी विधाहरु नबिक्ने होइनन् नि ! हामी आख्यानलाई सजिलै फेसबुक र युट्युवमा पढ्न पाउँदैनांै तर गीत, कविता, मुक्तक, गजल फेसबुक, युट्युवतिर सजिलैसँग पढ्न र हेर्न पाउँछौ । जसका कारण यी विधाका कृतिहरु कम बिक्री भएको जस्तो देखिएका मात्रै हुन् ।
तपार्ई गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालको पनि अध्यक्ष यो संस्थाबारे केही बताइदिनुस् न ?
मैले अगाडि पनि भने हामी गुरुङहरु पठन, लेखनमा धेरै पछाडि छौं । दुई/चार जना गुरुङ समुदायका राम्रा कवि, लेखकहरु हुनुहुन्छ तर उहाँहरु एक्लाएक्लै हिँड्नुभयो । अब हामी नेपाली र गुरुङ दुवै साहित्यलेखनका क्षेत्रमा आउनुपर्छ, आफ्नो समुदायको जीवनका बारेमा बिस्तारै आफैंले केही लेख्नुपर्छ र स्वदेश तथा विदेशमा छरिएर रहेका सम्पूर्ण गुरुङ लेखकहरु एउटै छातामा आवद्व भई अगाडि बढ्नका लागि यो संस्था स्थापना भएको हो । कृपया यसलाई जातीय संस्थाको रुपमा हेरेर त्रसित नभइदिनुहुन केही व्यक्ति र समुदायलाई अनुरोध गर्दछु ।
अबको योजना के छ ? तपाईको अर्को कृति कुन विधामा हुनेछ र कहिले पढ्न पाउलान् पाठकले ?
तत्काललाई त्यस्तो योजना छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । म सधैं नयाँ काम गर्न मन पराउने मान्छे । पाँच दशक बढीको इतिहास बोकेको मुक्तक विधाका लागि गौरी तमुले पनि फेरि मुक्तक लेखिरहनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन भन्छु म अहिले पनि । तर मुक्तकमा पनि केही नयाँपन दिनु थियो । उद्देश्यपूर्ण ऐतिहासकि काम गर्नु थियो र मात्रै समैं दर्बानी जन्मियो नत्र उही पुरानै धारका लागि भनेर समैं दर्बानी जन्मिन्थेन यो चाँही सत्य हो । भोलिको दिनमा पनि फेरि गौरी तमुलाई केही नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध भयो भने नेपाली साहित्यको जुनसुकै विधामा जतिबेला पनि भेट्न सक्नुहुनेछ ।